အခုအတိုင်းဆို နောက်တပတ်ကျော်ရင် ရန်ကုန်မှာ ကူးစက်နှုန်း ပြန်တက်လာတော့မယ် - Zet Star
အခုအတိုင်းဆို နောက်တပတ်ကျော်ရင် ရန်ကုန်မှာ ကူးစက်နှုန်း ပြန်တက်လာတော့မယ်
အပြင်မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းဆို နောက်တစ်ပတ်ကျော်ရင် ရန်ကုန်မှာ case တွေ အများကြီးပြန်တက်လာမယ်၊ စစ်ရင်ပေါ့လေ။
မစစ်ရင်တော့ အခုတွေ့နေသလိုပဲ အနံ့ပျောက်ချင်ပျောက်မယ်၊ မပျောက်ချင်မပျောက်ဘူး၊ ဒီလိုပဲသွားလာနေကြမှာပဲ။ ဘာလို့လဲ ဘယ်မှာလဲ အရေးယူမှု? ရန်ကုန်တာဝန်ရှိသူ ဘယ်သူလဲ? စစ်ဆေးနေသလား? စင်တာတွေကိုပဲ ကောင်းအောင်အားထုတ်နေပြီး ကာကွယ်ရေးကိုမလုပ်တာလား?
ဒီလိုပြောလို့ ပိတ်တဲ့ဖက်ကို အားပေးတယ်မထင်နဲ့နော် တရားဝင်ဖွင့်ချလိုက်စေချင်တာ ကျနော်က ထိပ်ဆုံးက၊ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ပိတ်တဲ့ ပေါ်လစီကြီးချပြီးတော့ ပိတ်လဲမပိတ်နိုင် ဖွင့်လဲမဖွင့်နိုင်၊ ရောဂါလဲမထိန်းနိုင် တောလိုလိုတောင်လိုလိုနဲ့ ဖြစ်နေတာကိုတော့ သဘောမကျဘူး။
ပိတ်ရင် နိုင်အောင်ပိတ်၊ မနိုင်ရင် လုပ်နည်းပြောင်း မဟုတ်လို့ကတော့ စည်းကမ်းလိုက်နာတဲ့သူ ခွေးဖြစ်ပြီး မလိုက်နာတဲ့ကောင် ကောင်းစားတဲ့ ခေတ်ဟောင်းလို ပြန်ဖြစ်မှာပဲ။
ပြောတာ ရှင်းတယ်နော် နိုင်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လုပ်။ ကိုယ့်ရှိတဲ့ အင်အားနဲ့မနိုင်ရင် မလုပ်နဲ့တော့၊ နိုင်မယ့်ပုံစံကိုပြောင်း၊ ကိုယ့်အင်အားနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကိုယ်အသိဆုံးဖြစ်မှာပဲ။ မနိုင်လဲမနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ပြောင်းရင် အပြစ်တင်ခံရမှာလဲစိုးတယ်၊ ဒီတော့ လေနဲ့ဆက်လုပ်နေအုံးမှာ ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိဘူး။
← လာမည့်ဆောင်းရာသီတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်း (၃) ကြိမ် ဖြစ်နိုင် (မိုးဇလပညာရှင် ဦးချစ်ကျော်)
ပြိုကျနေတဲ့ အိမ်ထဲမှာ နေရတဲ့ မြေးအဖိုး (၂) ယောက်တဲ့ (ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုများနေကြသလဲ?) →